Nezvedu - Shanghai Yubing Equipment Co, Ltd.
Isu tiri vanotungamira vanogadzira zvemhando yepamusoro kutonhora michina (inovhara yakavhurika uye yakavharwa-wedunhu inotonhorera, evaporative condensers uye mhepo inotonhorera) uye inoenderana yekurapa mvura michina (Ro mvura kurapwa, kusefa uye Ultra-kusefa, Kufefetedza Kwemvura, Chemical Dosing System uye MBR Tsvina -water Treatment system) iine makore angangoita makumi maviri ruzivo uye ruzivo.
Kwemakumi emakore, isu takapa yakasarudzika mhando michina uye sevhisi kune vatengi vedu uye taive shamwari inozivikanwa muvazhinji maindasitiri anosanganisira simba, oiri uye gasi, indasitiri inorema, iyo petrochemical indasitiri, magetsi emagetsi, petroleum refineries, pulp & mapepa ekugaya, simbi mafekitori, kunyorera zvifambiso, indasitiri yezvikafu nemidziyo yakagadziriswa yenzvimbo dzeveruzhinji senge chivakwa chemahofisi, chiteshi chechitima.
Munguva yekudyidzana nevatengi vari mumaindasitiri munda, isu takapihwa basa rekupa yakakodzera michina yekurapa mvura inovhara kubva kune tsime tsananguro yemvura kune tsvina-mvura yekudzokorodza maitiro. Icho chiitiko chisingawanzoitika uye hwakadzama hunyanzvi hwakatiita isu nyanzvi mune ino ndima.
Yedu yeinjiniya timu inyanzvi mukutonhodza shongwe dhizaini yekuwedzera kuti iwedzere kushanda zvakanaka asi ichivimbisa kutevedzera zvakakodzera mashandiro emvumo uye yedu yemakambani inochinjika kuti igadzirise nyore nyore kune edu vatengi zvirevo uye mamiriro tichitarisa kune vatengi zvese zvido zvakadai sekuronga saiti, mvura & mhando yemweya, kuongororwa mitengo, kurerukirwa kwekushanda uye kutendeka kwenguva refu uye hunyanzvi muindasitiri.
Chikwata chine simba cheICE chinotarisira kuita kuti budiriro ienderere mberi pamwe nevatengi vedu pasirese.
Ipa zvinogadzira, zvehupfumi uye zvinogara-kwenguva zvigadzirwa uye masevhisi anoenderana
izvo zvinodiwa uye zvinotarisirwa nevatengi vedu.
- CHIONO CHEDU--
Yedu inotonhorera shongwe dzakagadzirirwa kuti dzigadzike uye
vane yakaderera nharaunda kukanganisa.
- CHIMANGWA CHEDU -
Ruzivo ruzivo + Yepamberi yekugadzirisa michina + Vashandi vehunyanzvi pasi pekodhi yekudzidzira yakapihwa
ne Quality Management System = 100% kugutsikana chigadzirwa
- Kukosha kwedu -
Nhanganyaya yeKugadzira Base
ICE yekugadzira saiti iri mudunhu reShandong iro rine zvakanakira munzvimbo dzakashongedzerwa zvakanaka, vashandi vane hunyanzvi vanokwana uye zviwanikwa zvepasirese, uye nezano remunharaunda rinotsigira hunyanzvi nekuvandudza tekinoroji.
Kugadzira kwakatsamira kunoiswa mudura redu rekugadzira kuti tipe chivimbo chemhando yepamusoro zvigadzirwa zvine makwikwi maficha, panguva iyi, zvinopa mukana wekubata maererano nenguva yekutungamira uye kugona kwekugadzira, kunyanya kune yakagadzirirwa chirongwa.